Ndụmọdụ maka ule A / B na nyocha Google Play | Martech Zone
Maka ndị mmepe ngwa gam akporo, Nyocha Google Play nwere ike inye nghọta bara uru ma nyere aka nwekwuo nrụnye. Rungba ọsọ A / B nke a haziri nke ọma ma mee nke ọma nwere ike ime ka ọdịiche dị n'etiti onye ọrụ ịwụnye ngwa gị ma ọ bụ onye asọmpi. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ oge ebe elere ule n'ụzọ na-ezighi ezi. Emehie ndị a nwere ike ịrụ ọrụ megide ngwa ma mebie arụmọrụ ya.
Nke a bụ ihe nduzi maka iji Nyocha Google Play n'ihi na A / B ule.
Tọlite ​​nnwale Google Play
Nwere ike ịnweta nnwale nnwale ahụ site na ngwa ngwa ngwa Google Play Developer Console. Gaa na Echekwa Presence n'aka ekpe nke ihuenyo ma họrọ Nlekọta Ndepụta Storelọ Ahịa. Site n'ebe ahụ, ịnwere ike ịhọrọ “Nnwale Ọhụrụ” ma melite ule gị.
E nwere ụdị nnwale abụọ ị nwere ike ịgba ọsọ: Ndabere Graphics Experiment na Mpaghara nnwale. Ndabere Graphics Experiment ga-agba ọsọ ule na mpaghara na asụsụ ị họọrọ dị ka ndabere gị. Mpaghara inyocha, N'aka nke ọzọ, ga-agba ọsọ ule gị na mpaghara ọ bụla ngwa gị dị.
Nke mbụ na-enye gị ohere ịnwale ihe okike dị ka akara ngosi na nseta ihuenyo, ebe nke ikpeazụ na-ahapụ gị ịnwale nkọwa gị dị mkpirikpi na ogologo.
Mgbe ị na-ahọrọ ụdị ule gị dị iche iche, buru n'uche na ọtụtụ ụdị dị iche iche ị na-anwale, ọ ga-ewe ogologo oge iji nweta nsonaazụ arụ ọrụ. Ọtụtụ ụdị dị iche iche nwere ike ibute ule na-achọ oge na okporo ụzọ iji mepụta oge ntụkwasị obi na-ekpebi mgbanwe ntụgharị nwere ike.
Ghọta Ihe Ọmụma ahụ
Ka ị na-agba ule, ịnwere ike ịlele nsonaazụ ndị dabere na Oge izizi mbụ ma ọ bụ ndị ejiri aka (Otu ụbọchị). Ndị na - etinye Oge Oge mbụ bụ ngụkọta mgbanwe agbakwunyere na ụdị dị iche iche, ya na ndị na - ejigide ya bụ ndị ọrụ na - edebe ngwa ahụ mgbe ụbọchị mbụ gasịrị
Ihe njikwa ahụ na-enyekwa ozi na Ugbu a (ndị ọrụ nwere ngwa arụnyere) yana Scaled (ọnụọgụ ole ị ga - enweta ma ọ bụrụ na ụdị ahụ natara 100% nke okporo ụzọ n'oge ule ahụ).
Emepụtara oge ezumike 90% mgbe ule ahụ gachara ogologo oge iji nweta nghọta nghọta. Ọ na - egosi ogwe uhie / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke na - egosi etu mgbanwe ga - esi gbanwee ma ọ bụrụ na etinyere ụdị ahụ ndụ. Ọ bụrụ na ogwe ahụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ bụ mgbanwe dị mma, ọbara ọbara ma ọ bụrụ na ọ dị njọ, na / ma ọ bụ agba abụọ pụtara na ọ nwere ike ịgbanye n'akụkụ abụọ.
Omume kachasị mma iji tụlee maka ule A / B na Google Play
Mgbe ị na-agba ule A / B gị, ị ga-eche chere ruo mgbe etinyere oge ntụkwasị obi tupu ịme mkpebi ọ bụla. Ntọala kwa ụdị dị iche iche nwere ike ịgbanwee usoro nnwale ahụ, yabụ na-agba ọsọ ule ahụ ogologo oge iji guzobe ọkwa obi ike, ụdị dị iche iche nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche mgbe etinyere ya ndụ.
Ọ bụrụ na enweghị ụkọ zuru oke iji gosipụta oge ntụkwasị obi, ịnwere ike iji ọnọdụ mgbanwe tụlee kwa izu iji hụ ma enwere nkwekọrịta ọ bụla na-apụta.
Ga-achọ ịgbaso mmetụta nzipu ozi. Ọbụna ma ọ bụrụ na Oge Nkwenye na-ekwu na ụdị mgbanwe ga-arụ ọrụ ka mma, arụmọrụ ya nwere ike ịdị iche, ọkachasị ma ọ bụrụ na enwere uhie / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Mgbe ị gbasasịrị ụdị ule ahụ, lelee anya ma lelee etu esi emetụta ha. Mmetụta dị adị nwere ike ịdị iche karịa ka eburu amụma.
Ozugbo i kpebiri ihe dị iche iche na-eme nke ọma, ị ga-achọ ịkọwa ya ma melite. Akụkụ nke ebumnuche nke ule A / B bụ ịchọta ụzọ ọhụrụ iji meziwanye. Mgbe ị mụsịrị ihe na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịmepụta ụdị dị iche iche na-eburu nsonaazụ n'uche.
Iji maa atụ, mgbe ị na-arụ ọrụ na AVIS, Gummicube gafere ọtụtụ agba nke ule A / B. Nke a nyeere aka ịchọpụta ihe okike okike na izi ozi kachasị mma ndị ọrụ gbanwere. Approachzọ ahụ nyere 28% mmụba na ntụgharị site na njirimara eserese naanị.
Ogwuru egwu dị mkpa maka uto ngwa gị. Ọ na - enyere gị aka ịgbanye ụda na ntụgharị gị ka mbọ gị na - eto.
Nyocha A / B nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ iji melite ngwa gị yana mkpokọta gị Ngwa ụlọ ahịa ngwa. Mgbe ị na-ahazi ule gị, gbaa mbọ hụ na ị belatara ọtụtụ ụdị dịgasị iche iche ị nwalere n'otu oge iji mee ka nsonaazụ ule ahụ ọsọ ọsọ.
N'oge ule ahụ, nyochaa otu esi etinye ntọala gị na ihe Mmetụta Obi Ike gosipụtara. Ka ndị ọrụ na-ahụ ngwa gị, ọ ga-aka mma ka i nwekwuo ohere iji guzobe usoro na-agbanwe agbanwe nke na-egosi nsonaazụ ya.
N'ikpeazụ, ị ga-achọ ito ya mgbe niile. Ntughari ọ bụla nwere ike inyere gị aka ịmụta ihe kacha mma ndị ọrụ, yabụ ị nwere ike ịghọta nke ọma otu esi ebuli ngwa gị na ogo gị. Site na iji usoro ụzọ nyocha A / B, onye nrụpụta nwere ike ịrụ ọrụ iji bulie ngwa ha n'ihu.
Tags: Ndabere Graphics Experimentgoogle playGoogle Play Onye Mmepụta njikwagummicubeMpaghara nnwalenyocha ọhụrụndị na-ejigide ejidereEchekwa Presence